Obama oo Madaxda Afrika uga Digay in ay xilka isku Dhajiyaan – Radio Daljir
Obama oo Madaxda Afrika uga Digay in ay xilka isku Dhajiyaan
Luulyo 29, 2015 8:19 b 0
Arbaco, Luuliyo 29, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa uga digay Hoggaamiyeyaasha Waddamada Afrika inay diidaan inay xilka ka degaan marka uu Xilligoodu Dhammaado, kaddib Khudbad Taariikhi ahayd oo uu Maalintii Shalay ahayd ka jeediyay Xarunta Ururka Midowga Afrika ee Addis Ababa.
“Ma jiro Ruux Madaxweyne ahaanaya inta uu nool yahay oo dhan,” ayuu Barack Obama ku yiri khudbaddii uu ka jeediyay Xarunta Ururka Midowga Afrika, taasoo ahayd Middii ugu horreysay abid oo uu Madaxweyne Mareykan ah ka jeediyay Xarunta AU-da.
Obama ayaa saddex booqasho saddex maalmood qaadatay ku tagay Itoobiya, isagoo sidoo kalena horay u soo maray dalka Kenya oo uu ku sugnaa muddo Saddex casho ah, wuxuuna madaxda dalalkan kala hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin; Xuquuqda Aadanaha iyo Dimuqraadiyadda.
“Anigu ma Garanayo Sababta ay Madaxda Afrika xukunka isugu Dhajiyaan si ay Muddo dheer kursiga ugu fadhiyaan. Gaar ahaan marka ay urursadaan lacago fara badan,” ayuu ku yiri madaxda 54-ka waddan ee Midowga Afrika.
Sidoo kale, Madaxweyne Obama ayaa wuxuu ugu baaqay Midowga Afrika inuu xaqiijiyo in Hoggaamiyeyaasha Afrika ay Xushmeeyaan Dastuurrada u yaalla marka uu Xilligooda dhammaado. Wuxuuna walaac ka muujiyay Madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza oo la sheegay in mar saddexaad madaxnimada dalkaas loo doortay.
Hogaamiyihii Ururka Taalibaan oo la sheegay in uu Geeriyooday iyo dowladda Afganistan oo Baaraysa
DHAGAYSO:Faroole oo ka warbixiyay Ujeedka safarka uu ku yimid Garowe